Chimène Badi yakatsoropodzwa ne "jesters" panguva yeEurovision Enda: "Yakanga ichivhuvhuta kwazvo" - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU »Chimène Badi yakatsoropodzwa ne" jesters "panguva yeEurovision Destination:" Yakanga ichivhuvhuta zvakanyanya "
Pakupedzisira kwaJanuary, Chimène Badi vakapinda muchikamu chechipiri che Eurovision Destination, pamwe cheteEmmanuel Moire et Bilal Hassani. Kana iye asina kukunda nzvimbo yake kuzomirira France paEurovision Song Contest, muimbi haana kukodzera, nokuisa chechina. Mune hurukuro ne Gala, muturikiriPakati pedu dzokera kune ikozvino kubatanidzwa kwainochengetedza Kusiyana kwekuyeuka.
"Panguva yekuenda kuEurovision", [Ndakanga ndakatarirwa nevanovenga] ndisingazivi uye ndinoziva kuti ndinobatanidza zvinhu zvose, nokuti yekupedzisira kwemakwikwi kuchaitika muIsrael. Yakanga ichibhururuka zvakanyanya zvokuti ndakabvumira kupindura. Asi yakamira nokukurumidza sezvazvakauya anotsanangura muimbi wemakore 36. Chimène Badi uye akadzoka kumuratiro weBilal Hassani, achivimbisa kuti akanga anzwisisa kubva vhiki yekutanga yekukwikwidza kuti mitambo yakanga yatotangwa.
Pakati pegodo uye ruvengo
"Ndaive nechokwadi chokuti aizokunda" iye akabvuma. Chimène Badi aidawo kudzivirira muimbi wechidiki, akatarisana negakava rakapisa mushure mekunyorwa kwemaonero ake anonzi anti-Semitic tweets: "Pamakore e14, tine kodzero yekuita zvikanganiso. Ndaitarisira kuti atore mutengo mukuru, nokuti ndiwo mutemo wemutambo. Kushuva kunogara kuri panopera ruvengo" akadaro muimbi.
Exclusive - Chimène Badi - Vanhu vari pamusangano weTV yekuratidza "Toujours ensemble, notre raison d '
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.closermag.fr/people/chimene-badi-critiquee-par-des-bouffons-pendant-destination-eurovision-ca-volait-970046